ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးကို တကယ်ထိထိရောက် ရောက် အရေးယူလာတဲ့ အချိန် « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Uncategorized » ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးကို တကယ်ထိထိရောက် ရောက် အရေးယူလာတဲ့ အချိန်
ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးကို တကယ်ထိထိရောက် ရောက် အရေးယူလာတဲ့ အချိန်
James Mmt‘s status.
ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးကို တကယ်ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူလာတဲ့ အချိန်
အခုလက်ရှိ ဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စအများစုကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် ပြည်ပက တရားမ၀င် ကျူးကျော်ဝင်ရောက် နေထိုင်သူတွေကြောင့် ဖြစ်တယ် ဆိုတာ အထင်အရှားပါပဲ…… အဲ့ဒိအတွက် ရခိုင်လူမျိုးတွေကို အပြစ်တင်ဖို့ မရှိပါဘူး….. သူတို့ အနောက်ဘက်က မားမားမတ်မတ် ကာကွယ်ပေးထားလို့လည်း ဒီလောက်ခံသာနေတာပါ…… ဒီနေရာမှာ ကျွန်တာ် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘယ်လောက် ကြမ်းတမ်းကြောင်း၊ ဘူးသီးတောင် မောင်းတော တ၀ိုက်မှာ ရခိုင်တစ်ယောက်တည်း တွေ့ရင်သတ်သွားတာ ခဏခဏ ဆိုတာလည်း ရေးခဲ့ပေါင်း များပါပီ…..
အားလုံးကို ခြုံငုံသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင် အစိုးရအနေနဲ့ ဒီ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်နေထိုင်တဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ပြတ်ပြတ်သားသား ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ မထောက်ထားပဲ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းသင့်သလို၊ ပြည်တွင်းက အချို့ အချို့သော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ အနေနဲ့လည်း အပြောတစ်မျိုး အလုပ်တစ်မျိုး မလုပ်စေချင်တော့ပါဘူး….. မွတ်စလင် ညီအစ်ကိုများ ဆိုပီး ဆွန်နီ ရှီးယိုက် ကွဲပြားနေပေမယ့် ရည်မှန်းချက် တစ်ခုအတွက် မြှောက်ပေးနေတာတွေ ရပ်တန်းက ရပ်သင့်သလို ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ပြည်တွင်းကို ခိုးသွင်းပီး လမ်းကြောင်းများကတစ်ဆင့် ပြည်ပကို ပို့ပေးနေတဲ့ အပြုအမူတွေလည်း ဆက်မလုပ်သင့်တော့ဘူးလို့ တားချင်ပါတယ်….. နှစ်ဦး နှစ်ဘက် မြန်မြန်ပြေငြိမ်းစေချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်…..
ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးကို တကယ်ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူလာတဲ့ အချိန်မှာ လာဘ်စားတဲ့ လ၀က၊ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက အရာရှိတွေကို အရေးယူတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းက ဘယ်သူတွေကနေတစ်ဆင့် ဘယ်နေရာကနေ ဘယ်ကိုသယ်သွားတယ် ဆိုတာတွေ လူသိရှင်ကြား ထွက်လာရင် အခုထက်ပိုဆိုးတဲ့ အခြေအနေ ရောက်သွားနိုင်တယ် ဆိုတာ သတိထားမိကြရင်ဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အပိုင်းမှ အကြီးအကဲများ အနေနှင့်လည်း ထိမ်းသိမ်းကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်…..
Kyaw Zarni Win
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေရဲ့ ရပ်တည်မှုက ဘာလဲလို့ မေးချင်တယ်
၁ BBC က ရိုဟင်ဂျာကိတ်စ ဖွတယ် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ လက်ရှောင်နေတယ်
၂ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ BBC ကို ထိုင်းမှာ ဆန်ဒပြတယ်
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ လက်ရှောင်နေတယ်
၃ ဦးတင်ဦးက ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မရှိဘူးပြောတယ်
၄ ဦးခင်ရီက ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဘင်ဂါလီတွေပါလို့ပြောတယ်
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ အားလုံး လက်ရှောင်နေတယ်
၅ လန်ဒန်မှာ မြန်မာတွေ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်ကြောင်း ကို
၆ ရခိုင်ပြည် ရမ်းဗျဲကျွန်းမှာ ရခိုင်မလေးတစ်ယောက် ရက်ရက်စက်စက် မုဒိမ်းကျင့်
၇ ကုလားတွေ အသတ်ခံရတယ်
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေရဲ့ မဟာဂရုဏာမေတ္တာစာထုတ်တယ်..။
(၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေရဲ့ အနစ်နာခံမှု.. ကြိုးပမ်းမှုတွဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်စဉ်မှာ ပစ်ပယ်ထားလို့မရတဲ့ နေရာက ပါပါတယ်… လေးစားလောက်တဲ့ အဆင့်မျိုးမှာ ပါပါတယ်… ဒါပေမယ့် ဒီကျေးဇူးတွေက အမျိုး.ဘာသာ..သာသနာကို အစော်ကားခံပြီး ပေးဆပ်ရလောက်အောင်တော့ မတန်သေးပါဘူးဗျို့…)
Like · · Follow Post · 18 hours ago
Naw Naw Lay
ကိုယ့်ဘက်က ခံထားရတာတောင် ထပ်ပြီး ခံချင်နေသေးတဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါသေးလား။
မွတ်ဆလင် နိုင်ငံတွေမှာ သူ့လူမျိုး၊ သူ့ဘာသာကို ထိပါးရင် ခေါင်းဖြတ်သတ်တဲ့ သေဒဏ်ထိတောင် ရှိနေသေးတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာကို ထိပါးလာရင်လည်း အတိုင်းအတာ တစ်ခု အနေနဲ့ တုန့်ပြန်ရမှာ မရှိရဘူးလား?
ဒီလိုမျိုးချည်းပဲ ခံ ခဲ့လို့ ကမ္ဘာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေ ပျောက်သွားတာ မဟုတ်လား။
ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေ (အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အိန္ဒိုယ) အခု ဘယ်သူတွေ ကြီးစိုးသွားပြီလဲ။
ယခုခေတ် အခြေအနေကို ကြည့်မယ် ဆိုရင်လည်း
ပါကစ္စတန်မှာ တလောက အမေရိကန်က မွတ်ဆလင်ကျမ်းစာကို မီးရှို့လို့ ဆိုပြီး ပါကစ္စတန်က အမေရိကန် သံရုံးကို ပါကစ္စတန်လူမျိုးတွေ ၀င်စီးပြီး သံရုံးကို မီးရှို့ခဲ့တယ်။
သူတို့ ဘာသာကို ထိရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ မခံဘူး။
မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ ကပ်လျှက် ထိုင်းတောင်ပိုင်းမှာ ဆိုရင်လည်း ဘုန်းကြီးတွေ အစိုးရ စစ်သား လုံခြုံရေးတွေ အကူအညီနဲ့ ဆွမ်းခံနေရတယ်။
အလစ်မှာ ဘုန်းကြီးတွေ ခေါင်းဖြတ်ခံရတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က နောက်ဆုံးကျန် ဗုဒ္ဓဘာသာ မိသားစု (၄) ဦးကို မွတ်ဆလင်တွေ သတ်ခဲ့ကြတယ်။
အဲဒီရွာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ မရှိတော့ဘဲ အားလုံး မွတ်ဆလင်တွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။
အခု မွတ်ဆလင် အများဆုံး ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ထိုင်းတောင်ပိုင်းမှ မွတ်ဆလင်တွေက နိုင်ငံခွဲထွက်ဖို့ တောင်းဆိုနေကြတယ်။
အရင် ထိုင်းအစိုးရ အဘီဆစ်ဝိဇ္ဖာဇီဝ ပါတီမှာ မွတ်ဆလင်တွေ များတော့ အဲဒီ ကိစ္စကို မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူး။
ပါတီ တစ်ခု မှာ မွတ်ဆလင်တွေ များနေပြီ ဆိုရင် အဲဒီ ပါတီက မွတ်ဆလင် ကိစ္စကို မဖြေရှင်းရဲတာတော့ အမှန်ပဲ။
မဲအရေအတွက် နည်းမှာ ကြောက်တာလေ။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရှေးဟောင်း အဆောက်အဦတွေ အများကြီးပဲ ဒါပေမဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ က ဖျက်ဆီးပြီး သူတို့ သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်။
အခုထိ အဲဒီ အဆောက်အဦ အပျက်တွေ ရှိနေတုန်းပဲ။
အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ ပါကစ္စတန် ဆိုရင်လည်း ဗုဒ္ဓသာသနိက အဆောက်အဦတွေ အုတ်ပုံ ဖြစ်ကုန်ပြီ။
ပါကစ္စတန်က တက္ကသီလာ တက္ကသိုလ် ဆိုတာ ရှေးခေတ်က ဗုဒ္ဓသာသာစာပေတွေ သင်တဲ့ ကျောင်းပဲ။
အခု အုတ်ကျိုးအုတ်ပဲတွေ ပဲ တွေ့ရတယ်။
ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံး ရပ်တော်မူ ကျောက်ဆင်းတု ဘုရားကြီးတွေလည်း လမ်းခင်းကျောက် ဖြစ်ကုန်ပြီ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ လ (၂၀၁၂ ခုနှစ်) က မော်လဒိုက် ကျွန်းနိုင်ငံမှာ ပြတိုက်ထဲက ဗုဒ္ဓဆင်းတုတောင်တွေကို မွတ်ဆလင် တွေက ဖျက်ဆီးလိုက်တာ ပူပူနွေးနွေးပဲ ရှိသေးတယ်။
အိန္ဒိယမှာ ရှိတဲ့ ရှေးတုန်းက ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် လို့ ခေါ်တဲ့ နာလန္ဒာ တက္ကသိုလ် က အခု အိန္ဒိယ အစိုးရက ၀င်ကြေးယူပြီး စီးပွားရှာနေတဲ့ ရှေးဟောင်းပြတိုက် အုတ်ပုံ အဆင့်မှာပဲ ရှိတော့တယ်။
မွတ်ဆလင်တွေ ၀င်တိုက်ပြီး သံဃာတွေကို မီးရှို့တိုက်သတ်၊ ဗုဒ္ဓစာပေတွေကို မီးရှို့ခဲ့တာ အခုထိ အချို့ နေရာတွေမှာ မတူးဖော်နိုင်သေးတဲ့ မြေပုံ အုတ်ပုံတွေ ရှိတုန်းပဲ။
ရှေးတုန်းက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရင်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားလည်း ကမ္ဘာ့ မွတ်ဆလင် ဦးရေ အများဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်နေပြီ။
ဘောရောဘူးတ ဘုရားစေတီကြီးကတော့ အင်ဒိုနီးရှား မွတ်ဆလင်တွေ အတွက် စီးပွားရေး အဖြစ် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့ သဒ္ဓါတရားကင်းမဲ့တဲ့ သူတွေကြားမှာ မြတ်စွာဘုရား ဆင်းတုတော်တွေဟာ သီတင်းသုံး စံပယ်နေရတယ်။
ဒါကြောင့် "တော်တော် ပိန်းတဲ့ သူတွေ" ကို မေးလိုက်ချင်စမ်းပါတယ်။
(၁) မြန်မာပြည်မှာ ဗုဒ္ဓသာသနာ ပျောက်သွားစေချင်လား?
(၂) ရှေးအစဉ်အလာက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ အမွေအနှစ်ကို လက်ဆင့်ကမ်း မထမ်းချင်တာလား?
(၃) ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီး ဖျက်ဆီးခံရပြီး ဘုရား အုတ်ခဲတွေဟာ လမ်းခင်းမယ့် အုတ်ခဲတွေ ဖြစ်သွားချင်လား?
(၄) မြန်မာပြည်မှာ ရှိတဲ့ စေတီတော်တွေ အထဲမှာ ဌာပနာထားတဲ့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အရာတွေ ဘာသာခြားတွေ အတွက် ဖြစ်သွားချင်လား?
(၅) မြန်မာပြည်မှာ ဘာသာခြားတွေ မင်းလုပ် အုပ်စိုးတာကို သဘောကျလား?
(၆) ကိုယ့်ခြံစည်းရိုးကိုတော့ လုံအောင် မလုပ်ထားသင့်ဘူးလား?
(၇) ဘာသာ၊ သာသနာ ချစ်တဲ့ စိတ်များ မရှိတော့တာလား?
(၈) နိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်း ထောက်ခံမဲ အရေအတွက် နည်းမှာ ကြောက်ပြီး ဘာသာ၊ သာသနာကို စတေးခံ ကြမှာလား?
( ) ဒီမိုကရေစီ လို့ တွင်တွင် အော်နေတဲ့ တစ်ချို့ မွတ်ဆလင် နိုင်ငံတွေမှာလည်း သူတို့ ဘာသာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ညာခွင့် ပေးသလား?
(၉) သည်းခံတာ နဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို နားမလည်တာလား?
မေးစရာ လားပေါင်း များစွာကတော့ ရှိနေသေးတယ်။
သည်းခံတာနဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုတော့ မရောထွေးစေချင်ပါဘူး။
ဘာသာ၊ သာသနာ အတွက်တော့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တာတော့ ရှိကို ရှိရမယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ်က ခံနေရတာတောင် ဆက်ပြီးတော့ ခံနေချင်ရင်တော့
Monday near London
မြန်မာမီဒီယာ များသို့ မေးမြန်းခြင်း
၁ BBC က ရိုဟင်ဂျာကိတ်စ ဖွတယ် မြန်မာမီဒီယာတွေ လက်ရှောင်နေတယ်
မြန်မာမီဒီယာတွေ အားလုံး လက်ရှောင်နေတယ်
Yangon Press International က ကိုသူရမျိုးတစ်ယောက်ပဲ ရေးတယ်
ကျန်တဲ့မြန်မာမီဒီယာ ကြီးတွေအားလုံး လက်ရှောင်နေတယ်
မြန်မာမီဒီယာတွေ အားလုံး ဝိုင်း အော်ကြတယ်
မေး။ ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ လက်ခံဖို့ ပြည်ပမီဒီယာတွေက အမျိုးမျိုး ဖိအားပေးတယ်။ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေက ပါးစပ်ပိတ်နေကြတယ်လို့ ပြောနေကြတယ်။ ဒီရိုဟင်ဂျာအရေးကို နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုရှုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုရင် အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက်လို့မရသလို အမျိုးသားရေးကို စွန့်ပစ်လို့လည်း မရဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ လူဦးရေကို တွက်ကြည့်ပါ။ သူတို့နဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရဲ့ လူဦးရေကို ကြည့်ပါ။ ရခိုင်အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကနေ ပြိုဆင်းလာမဲ့ အန္တရာယ်ကို စိုးရိမ်တယ်ဆိုတာ သဘာဝကျတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လက်ခံရမဲ့ ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အဲဒီက ပြိုဆင်းလာမဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ အရေးကိစ္စကို ဗန်းပြပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို အရေးကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာ မှားပါတယ်။ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ လက်လည်း မခံနိုင်ပါဘူး။
အလားတူ ကျွန်တော် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့က မြန်မာပြည်မှာ နေပြီး၊ မြန်မာပြည်ကို ချစ်တယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဆန်ကိုစားပြီး မြန်မာပြည်မှာ ကြီးတယ်။ အဲဒီအတွက် အမေကို ကျော်ပြီးဒွေးတော်လွမ်းနေစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ အဲဒီတော့ ရခိုင်အမျိုးသားတွေရဲ့ စိတ်ပူပန်မှုဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပူပန်မှုပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ရခိုင်အမျိုးသားတွေဘက်က ရပ်တည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါက ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက်မှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ သန်းပေါင်း ၆၀ သော ပြည်သူတွေရဲ့ အနာဂတ်အတွက် စဉ်းစားရမှာပါ။ ပထ၀ီဝင်နိုင်ငံရေးအရ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ လူဦးရေ သန်း ၁၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ အိန္ဒိယက တစ်ဘက်၊ တရုတ်က တစ်ဘက် ကြားမှာ ရှိနေတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားရေး ခံကတုတ်၊ ယဉ်ကျေးမှုခံကတုတ်ကို မပြင်နိုင်ရင် ကျွန်တော်တို့ ကျွန်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ရေစုန်မြောလိမ့်မယ်။ အဲလိုကတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ အတွေးအခေါ်ရှိပြီးသားပါ။ ဒါ လူမျိုးရေးနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ တိုင်းပြည်အတွက် ထားရမဲ့ နိုင်ငံရေးသမားစိတ်ဓါတ်ပဲ။
By Burma Democratic Concern (BDC) in Uncategorized on 07/06/2012 .
← တရုတ်ဆိုတာနှိမ့်ချပြီးခေါ် ကြတာပါ.. ကန့် ကွက်ထားလို့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကတောင် ချိုင်းနားပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံလိုပြောင်းခေါ်ပါတော့မယ်။။။	Food for thoughts →